Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "kurega", iro shamwari manzwiro?
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Meaning of zvakanaka nzvimbo uye neizvi nzvimbo vachishandisa "kurega", iro shamwari manzwiro?
"Kuzvidzora" neizvi nzvimbo nezvahunonyatsoreva
nzira rwenyanzvi pakati 3500 Yen kuti kufembera usununguke yokunyatsoongorora
ndiye ari Major Arcana of kadhi "kurega" ndiko, kuti zvinhu wakatsiga inoratidza. Kugadzikana Toka kuchengetedza, asi zvinoreva kuti mamiriro ezvinhu anoitwa zvakasimba utariri, Toka anokwanisa kuchengetedza ushamwari zvakanaka murudo, ushamwari anoonekwa zviratidzo shanduko parudo, kuti zvinosanganisirawo inofara zvinoreva, akadai, zviri rutivi kadhi iri.
guru aibuda kwavo kuita chinhu kumanikidza mugumo, pari Hazvina kunge zvakaitika kuchinja, ndiko kuti hapana chiratidzo kuti kuitika munguva yemberi iri pedyo nokukurumidza, zvimwe zvinoreva nokuzvidzora ari yokumiririra . Kana
"kurega" nezvimwe manzwiro bato
kurega munhu akanaka nzvimbo Vanzveri kureva akabuda yakanaka chinzvimbo, mukuwedzera, kuitika nzvimbo yavo zvinoreva kuti mamiriro ano akatsiga kana kuva naye kuti mamiriro ezvinhu ndiwo mugumisiro wakanaka, zvinoreva kuti mamiriro ezvinhu akakomborerwa mazano uye pfungwa iri nani. In
rudo, nokuti ane unzwe zvakanaka chaizvo, unogona kunzwa mukana kuva norudo apo compressing daro pakati pake zvishoma nezvishoma. kadhi iri angatarisirwa kuti ukama naye kuti afambire mberi. Nokuti anonzwa unodziya chaizvo kuva newe, ndiko chakanaka pfungwa kuti kufunga kuramba takatsiga kwayo. Akangoverengawo By nemisoro nzira kwayo, anogonawo crap ndiko kureurura kwaari. Kana iwe
"kurega" iri neizvi nzvimbo nemamwe webato manzwiro
kurega harungashandurwi chinzvimbo Vanzveri kureva vakabuda, kana kuenda kwavo mwoyo ezvinhu munguva yemberi iri pedyo, mamiriro ezvinhu uye pfungwa zvinoratidza kuti pane mukana kuti achava Cloudy. Kusvikira mudanga zvazvakaita chinhu chikuru, akadai mutambo-kuchinja, zvingava zvinhu zvava sagadzikana Hazvina, kuti haana kuramba zvinyoronyoro kunzwa, zvingaita kuva tariro kana kuva mupfungwa. Ndiyo
rudo, kumeso chete kutamburira uye nematambudziko, ingava manzwiro ake anova haazivi. Uchanzwa kufunganya uye kusashivirira, saka nyore kuva simbe, pasina kuongororwa kuongorora manzwiro ake, nani nechokure zvingava zvakanaka. Toka kuva richangobva zvaanokwanisa rimwe bato kuti kunetseka, Toka vachanzwa mashoko akadai kuti vavhiringe rugare mupfungwa dzako, unogona kuva chero nhamba ezvinhu. Kana neizvi chinzvimbo
kuzvidzora vakabuda, zvakadzikama kunzwisisa nokuyerera wematambudziko, zvakakosha kuita chakarongwa yavo. Zviri nani kuti napo inobviswa, akadai makaro uye nokuchiva kwenyika vari, kuti nyore zvakadzikama kunzwisisa kuyerera, uye kusiya muviri ari kuerera wematambudziko unenge kutorwa kuti ndinoiitawo kwavo maitiro.